Madaxweynaha Kenya : Al Shabaab waa xoolo, waxay lumiyeen maskaxdoodii, Diinta Islaamkana way ka been sheegeen - iftineducation.com
iftineducation.com – Uhuru Kenyatta, Madaxweynaha Wadanka Kenya, ayaa galabta si xoogan u cambaareeyay weerarada Ururka Al Shabaab, ay la beegsanayaan dadka aan Muslimiinta ahayn, ee u dhashay dalkaasi Kenya.
Madaxweynaha, ayaa si caro ah u sheegay in Shabaabku ay yihiin kuwo xoolo ah oo aan lahayn wax maskax ah, isla-markaana ay ka been abuuranayaan Diinta Islaamka.
“Al Shabaab waa xoolo, waxay lumiyeen maskaxdoodii, Diinta Islaamkana way ka been sheegeen. Diinta Islaamka waa diin nabadeed oo nasteexo ah, bulshada Muslimiintuna waa kuwo hawl kar ah.” ayuu yiri Madaxweynaha Kenya.
Waxa kaloo uu yiri “Weerarada ka dhacaaya dalkeena yaan loo arkin mid cid gaar ah duulaan lagu yahay, ujeedada laga lee yahay waa in leeska horkeeno Muslimiinta iyo dadka kale aan Muslimka ahayn.”
Wuxuu intaa raaciyay “Weeraradu waa kuwo argagaxiso oo u baahan in si wada jir ah loo wajaho, Muslimiinta waa inay doorkoodu ka qaataan la dagaalanka Al Shabaab.”
Madaxweynaha, ayaa waxa uu markale uu diiday in Ciidanka Militariga Kenya laga soo saaro Gobolada Jubbada Hoose iyo Gedo, isla-markaana ay sii jooggi doonaan, sida uu yiri.
Hadalka ka soo yeeray Madaxweynaha Kenya, ayaa waxa uu meesha ka saarayaa dalabaadkii Ururka Al Shabaab, ee ahaa in Dowladda Kenya ay Ciidamada Militarigeedu kala baxdo Somaliya.